Global Voices teny Malagasy » Sahisahy Loatra Ny ‘Despacito’ Hoy Ny Tambajotra Fampitam-baovaom-panjakana Ao Malezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Aogositra 2017 4:57 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika
Trano fandihizana ao Kuala Lumpur, ny renivohitr'i Malezia. Sary Flickr avy amin'i Loren Infeld (CC BY-NC-SA 2.0)
Tsy ao anatin'ny filaharan-kiran'ny tambajotran'ny onjam-peom-panjakana sy ny fantsona fahitalavitra ao Malezia intsony ilay hira pop ‘Despacito’ taorian'ny fanombatombanan'ny Ministeran'ny Serasera sy ny Haino Aman-jery fa miharihary ho mihantsy ara-nofo ny tonon'ilay hira ary tsy mendrika ny fandefasana izany ho an'ny vahoaka .
‘Despacito ‘ ,ilay hira be mpandefa mivantana indrindra  hatramin'izay araka ny tatitra, dia avy amin'ilay mpihira Porto Rikana Luis Fonsi sy ilay mpiangaly rap Daddy Yankee, miaraka amin'ny dika namboarina manasongadina an'ilay kintan'ny pop Justin Bieber. Adika hoe ‘miadana’ na ‘moramora’ amin'ny teny malagasy ny teny Espaniola ‘despacito’ ary miresaka tantaram-pitiavan'olon-droa ny hira .
Ny antso fandraràna ny hira dia avy amin'ireo vehivavy ao amin'ny elatry ny antoko mpanohitra, Parti Amanah Negara, izay mikendry ny ho fantatra kokoa amin'ny maha-liampandrosoana azy raha oharina amin'ireo Islamika hiringiriny sasany avy ao amin'ny fiaraha-mitantan'ny fitondrana. Nanazava  ny fomba fijerin'izy ireo ny filohan'ny zavakanto sy ny kolontsaina ao amin'ny antoko, Atriza Omar:
Manaja ny zo fialamboly izahay, kanefa tokony hisy ny torolalana mazava kokoa mba tsy hanimban'ny fialamboly ny olona, ​​fa hahatonga azy ireo kosa ho tsara kokoa.
Na izany aza, tsy nilaza ny andinin'ny tononkira izay nanafintohina azy ireo ny antoko.
Nankasitraka ny fanapahan-kevitra ho toy ny vaovao tsara ho an'ny vehivavy sy ny reny ao Malezia ny antoko Atriza Umar taorian'ny fanambaran'ny Minisitry ny Serasera sy ny Haino Aman-jery Datuk Seri Salleh Said Keruak fa tsy halefa intsony ao amin'ny fandaharana ny Radio Televisyen Malezia (RTM) ny ‘Despacito':
… ny vahoaka eto amin'ity firenena ity dia tsy manohitra ny fialamboly amin'ny alalan'ny fanaovana izany (milaza ny fandraràna), kanefa tsy mila ny fidiran'ny sehon-javatra tsy mendrika ho lasa fenitra ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao izahay.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, lasa masiaka kokoa amin'ny fanosehana ny fampiharana hentitra ny finoana Islamika ao amin'ny fitantanana ny feon'ireo mpandala ny mahazatra avy amin'ny fiaraha-mitantan'ny antoko mitondra ao amin'ny firenena izay ahitana Miozolomana maro an'isa kokoa . Nahavita nanery ny fanjakana tamin'ny fanasivanana sarimihetsika , hira, ary boky izay hinoan'izy ireo fa mety ‘hanimba’ ny fiarahamonina ihany koa ny feon'ireo mpandala ny mahazatra ireo. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, voararan'ny sivana ny boky iray nampiroborobo ny dikan'ny finoana Islamo amin'ny fomba antonony.
Nanohana ny elatry ny vehivavy ao amin'ny antoko Parti Amanah Negara ihany koa ny antoko politika hafa. Naminavina ny amin'ny fandefasana hira mba hiarovana ny ankizy avy amin'ny ‘dikany tsy mendrika’ mihitsy aza i Zuraida Kamarudin, avy ao amin'ny Antoko Rariny ho an'ny Vahoaka (PKR) :
Tokony ho fantenana toy ny sarimihetsika ny hira. Mba hahazoana antoka fa tsy mitondra dikany tsy mendrika ny hira rehetra izay halefa . Tsara izany raha toa ka halefa any amin'ny tontolo tsy miankina. Rehefa mandefa ampahibemaso ilay hira ny tiako lazaina. Hihaino ireo karazana hira ireo noho izany ireo ankizy.
Nokianin'ny mpanakanto sy ny mpisera maro ny fanapahan-kevitra tamin'ny fandrarana ny ‘Despacito’ avy amin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana. Nanontany ny “antony tsy misy mahatakatra” izay nanesorana ny hira i John O, mpihira lehiben'ny tarika Paperplane Pursuit  .
Rehefa mety amin'izy ireo ny tsy fanarahana ny dingana ara-dalàna noho ny fanohanana fanehoan-kevitra tsy am-pisainana ho an'ny olona milalao ny fihetseham-pon'ny vahoaka, dia mirona mankany amin'ny fahaverezana ny vondron'orinasa tsirairay.
Nampisalasala ihany koa momba ny lojikan'ny fandrarana ny hira ny mpisera Twitter, @00Nuza:
Nankafy ny Despacito ny Maleziana tao anatin'ny tsy fahatakarana izany satria tena hira malaza ilay izy mandra-pilazan'ny RTM azy fa “maloto”.
Nanoratra i Philip Golingai, ilay mpanao matoandahatsoratra ho an'ny gazety The Star mikasika ny fomba fihainon'ny taranaka mitovy taona aminy ny hira tany amin'ny taompolo 1980 sy 1990, izay mirakitra tononkira azo adika ho teny tsy mendrika ihany koa kanefa tsy nitarika mankany amin'ny fanimbana.
Ny sasany indray nanondro ny fihatsaram-belatsihy  tamin'ny fandraràna ny hira rehefa ahitana hafatra toy izany ihany koa ireo hira maro hafa kanefa mandeha eny rehetra eny;
Hira Miisa 20 Tokony Tsy Halefantsika Intsony Ao Amin'ny Onjam-peo Satria Momba Ny Fihantsiana Ara-nofo Tanteraka Izy Ireo:
Aoka isika tsy hanadino ny Biby 5 an'i Maroon .
“Hihaza anao akia aho anio alina, hosamboriko ianao ary hohaniko velona”
Ny antoko izay nitaraina momba ny ‘Despacito’ dia anisan ‘ny mpanohitra ary maro ny fanontaniana raha toa izy ireo ka miezaka ny hahazo ny fanohanana avy amin'ny mpandala ny mahazatra na tsia. Nitaraina ny toerana noraisin'ireo vondrona mpanohitra ireo i Niki Cheong, mpandalin'ny fampitam-baovao :
Sioka omaly momba ny fandraràn'ny RTM ny Despacito, tena mampalahelo raha milalao ireo lalao ara-politika ireo i Amanah. Aiza no tian'ny mpanohitr'i Malezia ahatongavana ?
Amin'ny fandraketana, mahatsiravina ahy ilay hira. Kanefa ny sivana tsy mahavita manao na inona na inona hampandrosoana ny firenena …
Mbola mandeha any amin'ny tambajotran'ny fampitam-baovao tsy miankina ny ‘Despacito’ izay manjaka ao Malezia
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/08/104995/
 be mpandefa mivantana indrindra: https://www.theguardian.com/music/2017/jul/19/despacito-most-streamed-song-of-all-time-luis-fonsi-daddy-yankee-justin-bieberhttps://www.theguardian.com/music/2017/jul/19/despacito-most-streamed-song-of-all-time-luis-fonsi-daddy-yankee-justin-bieber
 Nankasitraka : http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/wanita-amanah-denies-being-moral-police-but-praises-ministry-for-barring-de#QI7w87PPIsODUXUY.97
 sarimihetsika : https://globalvoices.org/2017/03/15/disneys-new-gay-moment-outrages-religious-conservatives-in-malaysia-and-singapore/
 boky : http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/malaysia-sparks-anger-with-ban-on-moderate-islam-book#FirXWbSa7UDdpE7V.97
 fandefasana : https://www.nst.com.my/news/nation/2017/07/259101/screen-songs-way-we-vet-movies-urges-pkr-wanita-chief
 Nanontany : http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/artistes-conflicted-over-despacito-ban#fXcFuuvkTEkcS0sj.97
 Nanoratra : http://thestar.com.my/opinion/columnists/one-mans-meat/2017/07/22/do-kids-need-to-be-saved-from-lyrics-the-saying-goes-that-the-more-you-forbid-someone-from-something/